Indlela abesifazane abathanda ngayo eminyakeni ehlukene
Kukhona abesifazane abambalwa abangenani okungenani kanye empilweni yabo abangazange bazwe amazwi ukuthi bonke ubudala bayazithoba othandweni. Abanye bavumelana naye ngokuphelele, abanye ngokuphambene nalokho. Kodwa akusilo iphuzu, kodwa ukuthi ngezigaba ezahlukene zokuphila uthando luyabonakala ngathi ngezindlela ezahlukene. Uma ucabanga ngakho, isimo sethu sengqondo ezintweni eziningi sishintsha ngobudala, njengoba nje sishintsha thina.
Phakathi nenkathi kusukela eminyakeni engu-16 ukuya kwezingu-20
Kucatshangwa ukuthi okhethiwe uyohlanganisa izimfanelo ezifana nokungazibikezeli, imfihlakalo kanye nesifiso. Okokuqala, ukunakwa kuyadonseka kubantu abanjalo "ababi" abangakabi nemiphumela ebuhlungu yobusha obuthakathaka ngesimo sesisu esiswini, ubuso obuvuvukile, nezigoloni ezingabonakali. Ngakho-ke, ukuthi amakhasi ekuxhumaneni nomphakathi agcwele izitatimende ezimbi mayelana nokuphila nokunganaki kwesimo sengqondo ngokubhekiselele "ezindlebeni zokuthula".
Ubuhlobo obuhle ngokuvuma okunamandla nokugcwele ukuhlangana komuntu ongathandabuzi, ukushintshanisana nokuxabana okukhulu kwezinyembezi, izinyembezi nokukhala okuphelela ngokubuyisana okuyisiphepho. Emiphakathini ayikho indawo yokwenza njalo futhi inesihe, ihambisana nesiqubulo esithi "ngeke sibe njengabazali bethu"!
Ngalesi sikhathi, ubulili buyisigqila nje esiphundu emibonweni eyisisekelo. Akusekho ukuzethemba nokuvuselelwa ngokobulili, okuvame kakhulu kubantu abengeziwe abavuthiwe, abakwazi ukulawula izidingo zabo futhi benze izifiso zabo. Kulokhu kunezikhathi ezinhle, ngoba ngalesi sikhathi abantu bafunda okuningi, kufaka phakathi ubudlelwano bokwakha.
Esikhathini esukela eminyakeni engu-20 kuya kwezingama-30
Abakhethiwe kumele babe abahlakaniphile, abahle futhi bethembise kakhulu. Kusukela "abafana ababi" ngokusemandleni, kunezinkumbulo kuphela, okubi kakhulu akuzona izinkinga ezimnandi kakhulu. Ebudlelwaneni, ngaphezu kokuthandana, kukhona isabelo se-pragmatism. Imizwa yemizwa, kodwa yisikhathi sokucabanga ngekusasa. Kungakhathaliseki ukuthi amacebo ahamba kangakanani, kumele kube khona ukuqonda nokuthula phakathi kobudlelwane.
Kulesi sigaba, ubulili budlala indima ebalulekile. Akuyona nje into eyenziwe, isipiliyoni se-hormonal kule minyaka sesisimeme ngokuvumelana nalokho okudingayo izidingo zobulili. Owesifazane uyazi ukuthi ufunani kumlingani wakhe, futhi uyaqonda ukuthi yini ayilindele kuye, ikhono lokuveza nokuhlela izifiso zakhe kwezocansi.
Esikhathini esiyiminyaka engama-30 kuya kweyama-40
Manje, ngaphezu kwazo zonke ezingenhla, lowo okhethiwe akufanele abe kuphela ohloniphekile, onokwethenjelwa futhi ophumelelayo, ngaphezu kwalokho, akufanele akhathele isitembu epasipoti. Ebudlelwaneni, ukuhlukaniswa okucacile kwesikhathi eside, sína futhi esilula, isikhathi esifushane sibonisiwe. Into eyinhloko ukuba yinkosana engenakukhunjulwa ngehhashi elimhlophe, futhi ikakhulukazi umuntu ongamane nje afune ukuhlala endlini efanayo, kodwa ngubani ongasekela le ndlu esimweni esihle.
Ubuhlobo bocansi bukhulu kakhulu. Owesifazane akagcini nje ngokuthokozisa ngokobulili, uyazi ukuthi ukuthola umphumela olungile kubalulekile ukuba enze umlingani, nokuthi ungayithumela kanjani injabulo yangempela.
Kusukela eminyakeni engu-40 kuya ku-45
Eduzane kungaba ngamaphesenti angamakhulu kuphela "indoda yakho", konke okunye akubalulekile kakhulu. Ngokuvamile kule nkathi yobudala, abesifazane baphinde banesithakazelo kubafana "ababi" abasha, njengoba bethi hhayi ngokobulili, kodwa ukuze bangakhohlwa. Kungani owesifazane ozinakekelayo kufanele aziphikelele izinjabulo ezingenacala?
Ngezocansi manje akufanelekile ukukhohlwa nhlobo, ukusengaphambili kokuya esikhathini kuqala kuqala ukukhiqizwa kwamahomoni ngomzimba, ngakho isifiso sobulili siqiniswa futhi.
Kusukela eneminyaka engu-45
Okhethiwe uzoba yilapho owesifazane ezwa ukuthi akayithandi nje kuphela, kodwa futhi omncane. Akukhathaleki ukuthi kakade unezingane ezindala ezingaboni iqiniso le-romance, intsha iyinomoya. Izimpawu zokunakekelwa ngendlela yezimbali, ukuhamba nokuhamba ngezindawo zokudlela, iminyuziyamu, i-theaters, njll, manje kunencazelo ehlukile, ejulile. Inzuzo eyengeziwe kumuntu okhethiwe yikhono lokuthola ulimi oluvamile nabantwana nabazukulu.
Ubuhlobo bobulili buyaqhubeka nezinguquko, ama-hormone asethuthukiswa kancane kancane, kanti izinga lobulili luba lukhuni kakhulu. Ngisho lapha into eyinhloko ukuzwa ukuthi owesifazane ufunwa futhi uyathandwa!
Izifundo eziyisishiyagalolunye zokunqoba umuntu?
Uyazi kanjani ukuthi uyayithanda ngempela?
Indlela yokubuyisela uthando nenhlonipho yomyeni wakhe
Iyiphi indlela engcono kakhulu yokwenza ukuthula nomuntu othandekayo?
Ukuveza amanga mayelana nomshado
Uma umuntu ethi akakholelwa othandweni
Abadlali be-Italy: UMonica Bellucci
Psychology of recidivism, utshwala
Izinqubo ezinhle kakhulu zesikhumba sobuso
Indlela yokugcina umuntu-ama-Pisces
U-Evelina Bledan wembule imfihlo yokuvumelana kwakhe
Biography of Garik Bulldog Kharlamov
Isaladi yamaGreki nge-zucchini kanye no-utamatisi
Iziphi izipho ongayinika intombazane?
Khohlwa ukufutheka, iseluleko somqondo wezengqondo
I-pantyhose spring fashionable 2016: amamodeli wesifazane asezingeni eliphezulu kakhulu
Amazambane kanye noshizi ngesikhunta
Ukuhlukanisa ngaphandle kokucindezeleka
Amafutha abalulekile avela emaqabeni
Yisiphi isiqandisini sokukhetha ekhaya?